Kwi-coup d'état yeHonduras kunye neParaguay - Geofumadas
Ukusuka kwiinqongo zeHonduras neParaguay
NgoJuni, 2012 Ukuzonwabisa / ukuphefumlelwa, Izopolitiko kunye nentando yeninzi
Okokuqala, ndiqala ngokucacisa ukuba ndiyibiza ngokuba yi-coup d'etat ngoba emva kweenyanga kuphandwa ingxelo ye-Commission Commission yinyani le njengoko imeko yase-Honduras yabizwa kwaye sisibongozo sokuba impikiswano yamanye amazwe iya kukhokelela kwiminyaka emibini yokubandezeleka kubantu baseParaguay.
Ukufana kuninzi, kumacala omabini lulwaphulo-mthetho lwezentlalo kunye nengqondo phakathi kwengxowankulu elondolozekayo ngokuchasene nemibono yobume bobuhlanga. Umdla weklasi ebisoloko ilawula amandla kangangexesha leminyaka ngokuchasene nesoyikiso seenguqu ezonakalisa umgangatho wayo. Ukungazi ezinye iimodeli kunye neenkani zokugcina inkqubo ikhutshelwe kakubi kwezinye iimeko.
Ukwahluka, ukuba kwimeko yeParaguay, inkqubo ikhoyo ingamlinganiso kumgwebo woPolitiki kwaye sele isetyenzisiwe amatyeli aliqela; Imbambano yingxwelerha ekuye kwenziwa kuyo. Kwi- imeko yeHonduras Kumele ukuba yaqanjwa ngokujija ingalo yomthetho kwiqhinga lobugqwetha ekungekho mntu wakwaziyo ukugaya phantsi kwegama "Ukupheliswa kwemisebenzi ngokuzenzekelayo" kwaye kamva "Ukulandela uMgaqo-siseko." Ingxelo yeKhomishini yeNyaniso ekugqibeleni yacebisa ukuba uLingo lwePolitiki kufuneka luphunyezwe eHonduras kwaye emva kwentlekele eParaguay ngokuqinisekileyo siya kuba nayo kwiminyaka embalwa.
Kukho umehluko omkhulu phakathi kokwamkelwa kukaLugo esidlangalaleni kunye nesigqibo sakhe sokuhlala eParaguay. Kwimeko yeHonduras Ukhutshelwe ngaphandle kwelizwe kwi-pajamas kwaye wabekwa eCosta Rica, kunjalo kwingxowa yakhe ye-pajama onke amakhadi akhe etyala. Kuzo zombini iimeko, ngaphaya kwe-folkloric, ezi zimbini zibonisa esidlangalaleni, uhlaselo lwentando yesininzi kwaye ilizwe lavuma. Isidubedube sentlalontle eHonduras sikhokelele kunyaka wemvukelo, andikholelwa ukuba kukude eParaguay; Isiphumo soku yayiliqela leNkululeko kunye neLizwe lokuHlola elithatha umbutho wobusoshiyali ukuya kwinqanaba lokuthatha inxaxheba elingayeki ukukhathaza amaqela amabini emveli; kungengakuba besoyike kakhulu kuye kodwa kungenxa yokuba ukungaphatheki kakuhle kwezopolitiko kuye kwabangela.
Ngokunjalo, amagunya aseburhulumente aqhubekile endaweni yabo, emkhosini emacaleni abo kwizisele zabo kunye namajelo osasazo adlala indima ebalulekileyo njengoko ethengisa amantongomane kwizitrato zesekethe. Inikezelwa ngokulula esikhundleni sokugcina ukungathathi cala.
Kwaye ke idiploma yolawulo lwamazwe aphesheya kunye nomdlalo ofanayo, amazwe ashiyekileyo akamazi, enye into ibizwa ngokuba cwaka ikulindile ukuba kwenzeke into eyi-comic. Ibindikhumbuza umba we-Tin-tin eMelika, obonisa indlela amazwe asemxholweni we-Nordic asibona ngayo siphakathi kwe coups kunye ne antics.
Ngokuqinisekileyo, umgaqo-nkqubo wezizwe ngezizwe ufuna uhlaziyo olusebenzayo ngakumbi ngokujonga izinto ezintsha "ezenziwe eLatin America" ​​ngemithetho kunye nendima ephantsi ye-OAS kwiipatheni ezichongiweyo ngokucacileyo:
Imodeli entsha yokudibanisa. Oku sele kudala ipateni kwaye umgwebo wezopolitiko ubonakala ubolekisana nawo. Nangona besibonile amanye amandla e-autogolpes, "umgaqo-siseko" wokulawula ngokufumana ngokusemthethweni uza kwenzeka lonke ixesha la magunya mabini evuma.
Imodeli entsha yobuzwilakhe. Kananjalo asiyikhathaleli into yokuba le nto yenziwe ngabantu Ngezibonelelo ezininzi zobume bentlalo, iphethini iyingozi kakhulu ukuba ungakholelwa kwi-cherry kuphela. Ngubani omnqanda?
Ungenelelo lwehlabathi. Nangona i-OAS ingasakwazi ukuthumela izigcina-ntloko eziluhlaza okwesibhakabhaka ukuyokutshabalalisa urhulumente we-de facto, umthetho-siseko wentando yesininzi uvumela ukudlala ngecala elibuthathaka kula mazwe egxile kuqoqosho lwabo olulusizi, ukusikwa kwemali yokusebenzisana, ukunciphisa umda wamatyala amaninzi kunye nokuvalwa imida Kwimeko yeHonduras, kuyathathelwa ingqalelo ukuba i-OAS inokuthi ithintele intlekele okanye ubuncinci ibenolwazi ngento eyenzekayo. Ukuba i-OAS ayihlaziywa, umngcipheko wokungenelela uyingozi.
Kwaye kwimeko yethu, ukuba sifuna abantu baseYurophu bayeke ukubona imisila yomnye nomnye, kuya kufuneka siyeke ukuwasebenzisa. Umngeni omkhulu!
Ingxaki yethu ayiseyiyo eyokuqokelela okanye yokuchasa kodwa ukuthatha inxaxheba kwethu buthathaka kunyanzelisa ukuba abo sizikhethayo bazalisekise izithembiso zabo zephulo, sinike ukuqhubeka kwezicwangciso zexesha elide senze utyalomali olukhulu kwiindawo zemfundo, ezempilo, ezezindlu nezokhuseleko. kwezentlalo. Imfundo engaphezulu iya kusenza silumke ngakumbi xa sikhetha kwaye iya kusinika imibono engcono yokuthatha inxaxheba ngendlela yokuba umthetho usetyenziswe kwaye nezenzo zorhwaphilizo ezikhoyo ngoku ngenxa yetyala lethu hayi ezopolitiko ziyehla.
Kuya kufuneka ukuba siqonde ukuba akukho mntu uza kusisa ngaphambili, kwaye nasiphi na isisombululo kufuneka siphume ngokwethu. Ewe kunjalo, ngegalelo lokubona into eye yasebenzela abanye. Akukho nto igwenxa ngokuya kukubona ukuba amazwe aseNordic enze njani, enza ntoni-kwaye ayenzi-Spain, okwenziwa yiMelika, okwenziwe nguChile, okwenziwa nguPeru, eCosta Rica; Ukubona ezinye iimeko kuvula umbono kwaye kusinike iimpikiswano ezingakumbi. Ungakhupheli / unamathisele kwaye uhambelane nemigaqo-nkqubo yexesha elide engasuswanga rhoqo kwiminyaka emine kwaye yomeleze ukuthatha inxaxheba kwabemi esona siqinisekiso sikhulu sokuqhubeka.
Ewe, kunokuba kuninzi ukubuza. Kodwa apho kufuneka sijolise khona kwaye ukuya kuthi ga kwinqanaba lokufikelela kwethu kuya kufuneka sifake isandla kwiindawo zethu. Ngonyaniso kodwa ngaphandle kokuphulukana nethemba.
Ukuba kukho inzuzo kwezi ngxaki, kukuba mihla le sizazi ngakumbi izinto esisoloko sizazi. Lo monakalo ungenakulungiswa wenziwe kwi-bipartisanship, ukuba abalawuli bayazi ukuba siza kubabukela kwaye yonke imihla sifuna ukuzibandakanya ngakumbi ... nangona oku kufuneka sibalahle ecaleni lezopolitiko.
Inqaku elibi kukuba eli tyala liwuthobela ngokwenyani na umthetho wokuphathwa gadalala hayi ulwaphulo-mthetho olunamandla ongezeli kuzimeleyo ezivuthayo. Kuya kuba nomdla ukubona into eshishina kwiNdlu yoWiso-mthetho ngokwenza umsebenzi wesigqeba ngohlahlo-lwabiwo mali lwezibonelelo zeprojekthi, ukusebenzisa imali yePalamente ukukhankasela ezopolitiko nangona umthetho uthintela oko. Kuyintlekele ukuba uninzi oluchaphazelekileyo emva kwengxwabangxwaba yezopolitiko luye lwabemi kuba ukuwohloka kwezoqoqosho kunye nokuzinza kwezentlalo kudinga iminyaka ukuze ziphinde zilulame.
Kwiminyaka emibini, ingxelo yekomishini yinyani yeParaguay iya kuthi:
Yayiyintoni i-coup d'etat
Ukuba wonke umntu unetyala
Uxolelo lugubungela wonke umntu
Ukuqukumbela, akwenzekanga nto.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ungazi njani ii Geofumadas
Post Next Iingxaki kunye nencwadi Live Writer WordPressOkulandelayo "
Impendulo ibenye kwi "ukusukela kwi-coup d'état of Honduras and Paraguay"
Inqaku elibalaseleyo, ndinguHonduran obhala evela eNicaragua. Banyanzelisa abantu baseParaguay abathi, nokuba ngaba yayiyi-d'etat ye-coup, banzima kakhulu kwizigqibo ezimbi zezopolitiko.